Alexis Sanchez Oo Aan Noqon Doonin Xiddiga Kaliya Ee Bishan Ku Biiray Man United, Xiddig Kale Ayay Wadahadalo Kula Jiraan – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Alexis Sanchez Oo Aan Noqon Doonin Xiddiga Kaliya Ee Bishan Ku Biiray Man United, Xiddig Kale Ayay Wadahadalo Kula Jiraan
Alexis Sanchez Oo Aan Noqon Doonin Xiddiga Kaliya Ee Bishan Ku Biiray Man United, Xiddig Kale Ayay Wadahadalo Kula Jiraan
Alexis Sanchez ayaan noqon doonin kaliya ciyaaryahanka ku biira Manchester United bishaan, iyadoo warar ka soo baxaya warar sheegaya in xiddiga Barcelona Aleix Vidal uu wadahadalo kula jiro kooxaha Manchester iyo Liverpool.
Manchester United ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto weeraryahanka Arsenal Sanchez, iyadoo ciyaaryahanka reer Chile uu rajeynayo inuu noqdo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan taariikhda kooxda.
Wararka ayaa sheegaya in ay Red Devils xiddiga mushahar u siin doonto lacag dhan 350 kun oo Gini todobaadkii iyo waliba iyada oo u xiri doonta maaliyada caanka ah ee No.7 taas oo banaan tan iyo markii uu Memphis Depay u dhaqaaqay Lyon bishii la soo dhaafay.
wargeyska Isbaanishka ee Estadio Deportivo ayaa sheegaya in Sanchez uusan aheyn kaliya ciyaaryahanka ku soo biiraya Kooxda Man United bishan.
Waxaa la sheegayaa in xiddiga Barcelona Vidal uu wadahadalo kula jiro kooxaha Liverpool iyo Manchester, taasoo la micno ah in Red Devils ay heli karto xiddigii hore ee kooxda Sevilla.
Laakiin Barcelona ayaa laakiin u malaynaysa in uu Vidal ku laaban doono kooxdiisii hore ee Sevilla inkasta oo uu xiddigan doonayo in uu u soo dhaqaaqo premier league wadahadalana kula jira kooxaha Liverpool iyo Man United.